माया–प्रेमका किताब- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — प्रेम कथालाई विषयवस्तु बनाइएको किताब पढ्ने समय पनि हो भ्यालेन्टाइन्स डे । यसबेला उपहारको रुपमा एक–अर्कालाई यस्तामाया साट्‍ने किसिमका किताब पनि दिन सकिन्छ । दुई लेखक चार–चार वटा रोमान्टिक पुस्तक सिफारिस गर्छन् :
१) फस्ट लभ
सम्पादक : अजित बराल
१५ जना लेखकहरुको पहिलो प्रेमको संकलन हो फस्ट लभ । यसमा नेपालका पुराना लेखकहरुले आˆनो पहिलो प्रेमको अनुभव लेखेका छन् । यर्थाथमाआधारित छ । विभिन्न भूभागका लेखकहरुको पहिलो प्रेमको अनुभव पढ्दा रमाइलो लाग्छ । यो पुस्तक पठनिय छ । रमाइलो छ । हाम्रो समाज, त्यो बेलाको प्रेम बुझ्न यो पुस्तक पढ्न सकिन्छ ।
२) वे दिन
लेखक : निर्मल बर्मा
यो केहि दिनको कथा समेटिएको पुस्तक हो । फरक ठाउँबाट ‘प्राग’ सहरमा भेटिएका दुई अन्जानको कथा । यी दुईले केहि दिन त्यही शहरमा समय बिताउँछन् । लेखकको भाषा नै मिठो छ । हिन्दी भाषामा छ यो पुस्तक । मैले धेरै अगाडि पढेको हो । हेर्दा रोमान्टिक तर उदास किसिमको छ यो पुस्तक ।
लेखक : डेभिड फिन्‍काइनोस
यो किताबमाथि फिल्म बनेको छ । लभ स्टोरी पुस्तक हो । पछिल्लो समय मैले पढेको लभ स्टोरी पुस्तकमध्ये यसमा ताजा कथा छ । कथा भन्ने तरिका राम्रो छ । मेटाफोर्स प्रयोग उत्कृष्ट छ । पढ्दाखेरि मज्जा आउँछ । हृयाप्पी इन्डिङ छ । प्रेममा हुने हर कोहिले यो किताब पढ्दा हुन्छ ।
४) लभ इन द टाइम अफ कोलेरा
लेखक : गाब्रियल गार्सिया मार्खेज
मेरो फेभरेट पुस्तक हो यो । यसको कथा एउटा समयमा एउटा व्यक्तिले वान साइड प्रेम गर्छ । जिन्दगीको ७० वर्ष उनले त्यही प्रेमिकाको नाममा बिताउँछ । उनी ८० वर्षको हुँदा त्यो केटीसँग अन्त्यमो भेट हुन्छ । प्रेम कथामाथि गहिराइमा लेखिएको पुस्तक हो यो । प्रेमलाई गहिराइमा बुझ्न यो पुस्तक पढ्नुपर्छ । पछिल्लो समय बलिउड फिल्मले निर्माण गरेको आदर्श प्रेमभन्दा फरक प्रेमकथा यसमा छ । आदर्श प्रेमलाई यसमा समेटिएको छ । बदलिएको समयको आदर्श प्रेम पढ्न रमाइलो हुन्छ ।
ऋचा भट्टराईका रोजाइ
१) द टाइम ट्राभलर्स वाइफ
लेखक : अड्री निफनेगर
एक जना मानिसले अर्कोलाई कति समयसम्म प्रेम गर्न सक्छ ? आफू बााचुन्जेल ? मृत्युपछि पनि ? वा हामीले गीतहरुमा गाउने जस्तो जन्म–जन्मसम्म ? यो अनौठो प्रेम कथा एउटा यस्तो व्यक्तिको हो, जसको समय अस्थिर छ । घरि उसकी प्रेमिकाको बाल्यकालमा पुग्छ, घरि आˆनै विवाहको दिनमा हराउँछ । प्रमुख पात्र क्लेरसँगै निदाइरहेको श्रीमान हेनरी एक्कासि बिलाउँछ, कतै टाढाको समुद्री किनारमा नाङ्गै ब्युातिन्छ । कुनै ठेगान नभएको, अतित र भविष्यमा रुमल्लिने यस्तो मानिससँग अथाह प्रेम गरेकी छिन् क्लेरले । उनीहरूबीचको त्यो अलौकिक बन्धन, उनीहरुले साँचेर राख्ने प्रत्येक पल, यदाकदा भेट हुँदाको असिमित खुशी यो पुस्तकमा समावेश गरिएको छ । आˆना प्रियजन टाढा भएका पाठकहरुका लागि यो उपन्यास प्रेमको शक्ति सम्झाउने पुस्तक हुनेछ ।
२) अ लिटिल लाइफ
लेखक : हान्या यानागिहारा
यानागिहाराको यो दोस्रो पुस्तकमा समलैङ्गिक प्रेम र मित्रताको हृदयविदारक चित्रण छ । अत्यासलाग्दो घृणा, शोषण, दुख र कष्टबीच एउटा भाँचिएको मानिसको मनमा पनि उम्रन सफल एउटा असाधारण र अमूर्त प्रेम समेटिएको छ । प्रेमको अन्तिम विन्दु विवाह हो भन्ने आम बुझाइभन्दा धेरै पर यो उपन्यासले सम्झाउँछ । प्रेम केवल असल मित्रता हो, हर क्षण आफ्‍नो प्रेमीको खुशी र आनन्दमात्र चाहने एउटा निजी अनुभव हो । प्रेम भनेको मात्र प्रेम हो, यसलाई कुनै विभूषण र अर्थ चाहिँदैन । कमै पुस्तकले पाठकको मनमा यति दया र स्नेह जगाउन सक्छन्, जति यो उपन्यासको ‘जुड’ ले जगाउँछ । विस्तृत, विशाल, मन छुने प्रेमकथा हो यो ।
३) नरेन्द्र दाइ
लेखक : विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला
नरेन्द्र दाइ पढ्नु पर्छ गौरी भाउजुको प्रेम र समर्पण बुझ्न । त्यो शान्त, स्निग्ध, दिव्यवान उनको मुहार, अनि दुखपूर्ण जिन्दगी–कस्तो विडम्बना, कति पीडा नरेन्द्र दाइको पात्रलाई घृणा गर्न खोजे पनि सकिँदैन । उनी पनि हामीजस्तै परिस्थिति र लालसाले किच्चिएका एक कमजोर व्यक्ति । अनि मुनरिया–सारा संसारले उनलाई पतित माने पनि आफ्‍नै नजरमा उ कति उच्च छे, उनले माया गरेकी छे, उनको प्रेममा उनप्रति खोट देख्दिन । स्‍नेहका बलले संसार जित्ने उन्माद छ उनमा । त्यो आत्मविश्वासलाई समयले खल्बल्याउँछ । पटकपटक जीवनले प्रहार गर्छ तर अन्त्यमा पनि नायिका नै बनिरहन्छे–मुनरिया । सरल र सुन्दर लेखन अनि प्रेम माथिको एउटा मनोवैज्ञानिक चिन्तनका लागि पढ्नैपर्छ उपन्यास नरेन्द्र दाइ ।
लेखक : कमिला शम्सी
ब्रिटिस–पाकिस्तानी लेखक कमिला शम्शीका उपन्यासहरुमा हुन्छन् ज्यान दिएर र लिएर प्रेम गर्न तम्सिने पात्रहरु, समाजको संरचनालाई हुरीझैं तहसनहस पारि स्‍नेह पोख्ने प्रेमीहरु । तर यो उपन्यासमा एउटा फरक प्रेम छ–जुम्ल्याहाहरुको । एकै आत्मा भएर हुर्किएका अनि एकअर्काको श्वासले बाँच्ने दाजु–बहिनी हुर्किएर भिन्नभिन्नै धार समात्छन् । कानुनविपरीत ध्रुव । यसैबीचमा बहिनीको जीवनमा प्रेम आउँछ, यस्तो प्रेमी जसका लागि उनी प्राण त्याग्न तयार छिन् । अनि कथामा मोड आउँछ–दाजु कि प्रेमी ? आत्मा कि मुटु ? रहस्य, रोमाञ्च र अपत्यारिला घुम्तीहरुले भरिएको प्रेमका धेरै रङ पोतिएको उपन्यास हो यो ।
प्रस्तुति : रीना मोक्तान
प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ १३:३७
गएको साता राजधानीमा भएको ‘काठमाडौं युथ कन्क्लेभ’ मा २० वटा स्कुल तथा कलेजमा तीन हजार बढी विद्यार्थी सहभागी थिए । यी विद्यार्थीहरू के गर्न चाहन्छन् त ?
फाल्गुन २, २०७६ नुमा थाम्सुहाङ
काठमाडौँ — बैंकर बन्ने सपना छ निर्मल मगरको । पोखरा, नयाँ गाउँका १८ वर्षीय उनी आफ्नो सपना साकार गर्नका लागि व्यवस्थापन विषय लिएर १२ मा अध्ययनरत छन् । नेपालमै बैंकिङ क्षेत्रमा भविष्य बनाउनलाई उनी यति बेलादेखि नै मिहिनेत गरिरहेका छन् ।
दुर्गम ठाउँका आम नागरिकसम्म बैंकिङ पहुँच पुर्‍याउने आफ्नो योजना रहेको निर्मलले सुनाए, ‘अहिले धेरै बैंक सहर केन्द्रित मात्र भएका देखिन्छन् । सबैको हातैमा बैंकको सेवा पुर्‍याउने सपना छ ।’ स्वदेशमै पढेर सफलता प्राप्त गर्न सकिने आत्मविश्वास बढेको उनले बताए ।
कसैलाई व्यवसाय गर्न कर्जा चाहियो । गाउँको साहुसँग किन ऋण माग्ने ? उनले आफैंले गरेको प्रश्नलाई स्पष्ट पारे, ‘किसानलाई कृषि, व्यवसाय सुरु गर्ने र बढाउनेलाई सहज तरिकाले कर्जा उपलब्ध गराउने वातावरणको सिर्जना गर्नु छ । धेरैले ऋण लिएर पनि तिर्न सकेका हुँदैनन्, यसका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने संस्थाले उपयोग हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाई समाधानतर्फ जानुपर्छ ।’
गत २४ माघमा माध्यमिक विद्यालय र स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि काठमाडौंका ५ कलेजले संयुक्त रूपमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा दोस्रो काठमाडौं युथ कनक्लेभ २०२० आयोजना गरेको थियो । त्यसमा २० वटा विद्यालय तथा कलेजबाट ३ हजार विद्यार्थीको उपस्थिति थियो । कार्यक्रमको उद्देश्य विद्यार्थीलाई सही दिशा निर्देश, सामाजिक संलग्नतामा उत्प्रेरित र स्वदेशमै सफलता पाएका व्यक्तिबाट प्रेरित गर्ने थियो ।
भेलामा सहभागी सबै विद्यार्थीमा भविष्यप्रति चिन्ता स्पष्ट देखिन्थ्यो । अन्योल हटाउनकै लागि कार्यक्रममा सहभागी भएको पोखरा, रामबजारका मनीष गुरुङले बताए । १८ वर्षीय उनी म्यारिगोल्ड बोर्डिङमा १२ कक्षामा कम्प्युटर साइन्स पढिरहेका छन् । नेपालमा इन्फरमेसन टेक्नोलोजी (आईटी) मा धेरै सम्भावना देख्ने उनी यसै क्षेत्रमा भविष्य बनाउने योजनामा छन् ।
‘नेपालमा आईटी क्षेत्रको सम्भावना धेरै देख्छु,’ मनीष आफ्नो भविष्यमा के बन्ने भन्नेमा स्पष्ट छन्, ‘सफ्टवेयर इन्जिनियर बन्ने चाहना छ । नेपाल टेक्नोलोजीमा धेरै पछाडि छ । त्यसैले यसको प्रयोगको सम्भावनालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्नु छ ।’ प्रविधिको समय भएकाले यसको प्रयोगबाट फाइदा लिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ, ‘हार्डवेयर, सफ्टवेयर, प्रोग्रामिङ तथा एप्सको विकासमा नेपाल अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसमा अहिलेदेखि नै केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
न्याय र सत्यको पक्षमा बोल्न मन पराउने तीनकुने (काठमाडौं) का १८ वर्षीय अप्सना खड्का कानुन लिएर १२ कक्षामा अध्ययन गर्दै छिन् । अहिले देशमा बढिरहेको बलात्कार जस्तो घटनामा कसैले न्यान नपाएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, ‘धेरै पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । दोषीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रधानन्यायाधीश बन्न चाहन्छु ।’ समाजमा अधिवक्ताले राम्रो भूमिका खेल्नुपर्ने पनि उनी बताउँछिन् ।
कानुन पढेर धेरै क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । यसबाट राजनीति, सरकारी र निजी क्षेत्र तथा प्रशासन सबैमा कानुन जान्नुपर्ने भएकाले यो विषय पढेर भविष्य निर्माण गर्न सकिने अप्सनाले सुनाइन्, ‘यहाँ वकिल बन्न नेपालको कानुन पढ्न आवश्यक छ । विदेशका विश्वविद्यालयबाट यहाँको कानुन राम्ररी थाहा पाउन सक्दैनौं । सिद्धान्तको कुरालाई व्यावहारिक परीक्षणका लागि पनि नेपालमै पढ्न आवश्यक छ ।’ नेपालमै धेरै राम्रो विश्वविद्यालय र शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएको उनको तर्क छ ।
गाईघाट, उदयपुरकी २० वर्षीया सुस्मिता कटुवाल नपढेका र सीप नभएकालाई रोजगार दिन आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न चाहन्छिन् । व्यवस्थापन संकायको स्नातक तहको तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत उनी भन्छिन्, ‘आफ्नै बिजनेस चलाउने विचार छ । सबै सुविधाका साथ रेस्टुराँ र हाउजिङको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने चाहना हो । सुरुमा कुनै कर्जा वा साझेदारीमा भए पनि व्यवसाय गर्न समस्या छैन ।’ आफ्नो व्यवसायलाई सफलतामा पुर्‍याउन मिहिनेत गर्नुपर्ने उनले बताइन् । उनी लगातार दोस्रोपल्ट यो युथ कनक्लेभमा सहभागी भएकी हुन् । कक्षा १२ अथवा स्नातक गरेपछि पढ्नलाई विदेश नै रोज्नुपर्छ भन्ने छैन । पढेपछि काम गर्न र आफैंले केही गर्नका लागि नेपालमै अवसर देखेकी छन् सुस्मिताले ।
रूपन्देहीस्थित बुटवलदेखि विज्ञान पढ्न १८ वर्षीय विपिन ज्ञवाली काठमाडौं आएका छन् । काठमाडौं मोडल कलेजमा १२ कक्षामा होस्टेल बसेर पढिरहेका उनी सिभिल इन्जिनियर बन्न राजधानी आएको बताउँछन् । भौतिक विकास निर्माणका लागि सिभिल इन्जिनियरको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उनको बुझाइ छ । ‘विकासका संरचना बनाउने भनेको इन्जिनियरले हो,’ उनले भने, ‘नेपाल विकासोन्मुख देश भएकाले अवसर धेरै छ । यहाँ विकास निर्माणका लागि धेरै काम हुन बाँकी छ । त्यसका लागि आफूले नै संरचनाको नक्सा बनाउने सपना छ ।’ प्रतिस्पर्धासँगै अवसर पनि भएकाले पढ्नलाई राजधानी आएको उनले बताए ।
न्यु समिट कलेज, शान्तिनगरकी सरिसा घिमिरे कम्प्युटर साइन्समा स्नातक तहको चौथो वर्षमा अध्ययनरत छिन् । दोलखाकी २२ वर्षीया उनी आफ्नै सफ्टवेयर कम्पनी चलाउने सोचमा छिन् । भन्छिन्, ‘हार्डवेयर, सफ्टवेयरसम्बन्धी कम्पनी चलाउने चाहना पूरा गर्न विभिन्न क्लास र ट्रेनिङ लिइरहेकी छु, जसले पढेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्न सजिलो बनाउँछ । आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न मद्दत गर्छ ।’
प्रविधिको युग भएकाले प्रविधिबिना केही गर्न नसक्ने अवस्था आएको सरिसा बताउँछिन् । नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच सबैको हातमा पुर्‍याउन नसकेको र यसैलाई विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा काम गर्न चाहन्छिन् उनी । ‘सबै इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन्, भएकाले पनि सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘व्यक्तिको व्यक्तिगत डाटा सर्भरबाट सुरक्षित हुन सक्ने वातावरण छैन । यो अन्योल हटाउन जरुरी छ ।’
तस्बिरहरू : विजु महर्जन
प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ १३:१७